Ukwahluka kweLambda: Ukuxhathisa isitofu kunye nokusasazeka ngakumbi?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Ukwahluka kweLambda: Ukuxhathisa isitofu kunye nokusasazeka ngakumbi?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseChile zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukwahluka kweLambda kwe-COVID-19 kunokuba linyathelo elinyukayo ukusuka kwi-Delta Variant yangoku, ekrokrelwa ukuba ibangela utshintsho ekuhanjisweni okanye ekubangeleni isifo esibi.
Nangona kunjalo isephantsi kophando. Izifundo zelebhu zibonisa ukuba ineenguqu ezichaseneyo neentsholongwane.
Ukwahluka kweLambda kutsala umdla njengesoyikiso esitsha esinokubakho kuphuhliso lwesifo se-COVID-19
Ukwahluka kweLambda yecoronavirus, eqale yachongwa ePeru ngoDisemba, inokuba iyabuyela umva, kodwa ikwanethuba lokubangela isifo esiqatha ukuba ayipheliswa. Amatyala afunyenwe eTexas naseMzantsi Carolina, nakwi-81% yamatyala afunyenwe ePeru.
Umahluko weLambda ineenguqu ezichasene nogonyo.
Iinguqu ezimbini kwiLambda eyahlukileyo-i-T76I kunye ne-L452Q-ziyenza yosule ngakumbi kunaleyo ye-COVID ethe yatyhutyha ihlabathi ngo-2020
Izigqibo zophononongo zihambelane nokufunyenwe liqela laseChile elithe lafumana okwahlukileyo kunokuthi kwakhona kuphephe izilwa-buhlungu zokugonya, kuxelwe ukuLawulwa kwezifo eChile.
Le ngxelo ayikaqwalaselwa ngoontanga.
Umahluko we-COVID-19 obonisa ukunganyangeki kugonyo ugcina iingcali zonyango, amagosa ezempilo yoluntu, kunye neengcali zokhathalelo lwempilo kwiindawo eziphambili zobhubhane we-COVID-19 ebusuku.
Yintoni umahluko weLambda ngokwesifundo esivela eChile?
imvelaphi Umnombo osandula ukuchazwa weSARS-CoV-2 umgca C.37 kutshanje ubekwe njengohlobo olwahlukileyo lomdla yi-WHO (Lambda variant) esekwe kumanqanaba aphezulu okusasazeka kumazwe aku Mzantsi Melika kunye nobukho botshintsho olubalulekileyo kwiprotein ye spike. Iziphumo zolu tshintsho kusulelo kunye nokubaleka amajoni omzimba kwi-antibacterial antibodies ayaziwa kwaphela.
tindlela Senze i-pseudotyped virus neutralization assay kwaye safumanisa ifuthe leLambda eyahlukileyo kusulelo kunye nokubaleka amajoni omzimba kusetyenziswa iisampulu zeplasma kubasebenzi bezempilo (HCW) kumaziko amabini eSantiago, eChile abafumene isikimu sedosi ezimbini sesitofu sokugonya esingasebenziyo seCoronaVac.
Siqwalasele ukonyuka kokungazinzi okulamliweyo yiLambda spike protein eyayiphezulu kakhulu kunaleyo ye-D614G (umgca B) okanye iAlfa neGamma eyahlukileyo. Xa kuthelekiswa nodidi lwasendle (umgca A), ukungathathi cala kwehle ngo-3.05-phinda ukwahluka kweLambda ngelixa yayiyi-2.33-fold yokwahluka kweGamma kunye ne-2.03-fold yokwahluka kweAlfa.
izigqibo Iziphumo zethu zibonisa ukuba utshintsho olukhoyo kwiprotein ye-spice yolwahlulo lweLambda lomdla luye lwonyusa ukosuleleka kunye nokubaleka kwamajoni omzimba ekuthomalaliseni izilwa-buhlungu ezenziwe yiCoronaVac. Ezi datha zomeleza umbono wokuba amaphulo amakhulu okugonya kumazwe ane-SARS-CoV-2 ephezulu yokuhamba kufuneka ikhatshwe kukujonga ngokungqongqo kwe-genomic ukuvumela ukubonwa kwabantu abatsha abodwa abaphethe utshintsho lwezipikisi kunye nezifundo ze-immunology ezijolise ekuchazeni ifuthe lolu tshintsho ekubalekeni komzimba kunye iyeza lokugonya.
Ukuvela kwe-SARS-CoV-2 eyahlukileyo yenkxalabo kunye nokwahluka komdla kuye kwaba luphawu lwesibetho se-COVID-19 ngo-2021.
Umnombo osandula ukwabelwa we-SARS-CoV-2 umgca C.37 kutshanje wachazwa njengokwahluka komdla yi-WHO ngoJuni 14th kwaye ichazwe njengeLambda eyahlukileyo. Ubukho balo mahluko mtsha buxeliwe ngaphezulu kwamazwe angama-20 ngoJuni 2021 uninzi lolandelelwano olukhoyo oluvela kumazwe ase Mzantsi Melika, ngakumbi eChile, ePeru, e-Ecuador nase-Argentina.5. Lo mahluko mtsha womdla ubonakaliswa bubukho bokususwa okuguqukayo kuhlobo lwe-ORF1a (Δ3675-3677) esele ichaziwe kwiBeta kunye neGamma eyahlukeneyo yenkxalabo kunye notshintsho Δ246-252, G75V, T76I, L452Q, F490S, T859N kwi spike protein6. Iziphumo zolu tshintsho lwespike kusulelo kunye nokubalekela ekuthomalaliseni ii-antibodies azaziwa kwaphela.
I-Chile okwangoku iqhuba inkqubo enkulu yokugonya. Ngokwedatha kawonke-wonke evela kwiCandelo loMphathiswa Wezempilo nge-27 kaJunith I-2021, i-65.6% yabantu ekujoliswe kubo (abaneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu) bafumene isikimu sokugonya esipheleleyo7. Isininzi (78.2%) sabantu abagonyelweyo ngokupheleleyo bafumene icebo lokuthintela intsholongwane elingasebenziyo iCoronaVac, ekwakukhe kwaxelwa ngaphambili ukuba ibangela ii-antibodies ezithomalalisayo kodwa kwiziters ezisezantsi xa kuthelekiswa ne-plasma okanye i-sera evela kubantu abanyibilikayo.
Apha, sisebenzise i-pseudotyped virus neutralization assay yethu12 Ukuchonga ifuthe lokwahluka kweLambda kwiimpendulo ze-antibodies ezithomalalisayo ezenziwe ngugonyo lwe-virus olungasebenziyo lweCoronaVac. Idatha yethu ibonisa ukuba utshintsho olukhoyo kwiprotein ye-spice ye-Lambda eyahlukileyo yonyusa ukosuleleka kunye nokubalekela ekuthomalaliseni izilwa-buhlungu ezikhutshwe ligonyo le-virus elingasebenziyo iCoronaVac.
Abasebenzi bokhathalelo lwempilo abavela kwiindawo ezimbini eSantiago, eChile bamenywa ukuba bathathe inxaxheba. Amavolontiya afumana isikimu sedosi ezimbini seCoronaVac, idosi nganye ilawulwa ngaphandle kweentsuku ezingama-28 ngokwenkqubo yokugonya yaseChile. Iisampulu zePlasma zaqokelelwa phakathi kukaMeyi noJuni 2021. Bonke abathathi-nxaxheba batyikitya imvume enolwazi ngaphambi kokuba kwenziwe nayiphi na inkqubo yokufunda.